Tag Archives: Males Zenawi
DAGAAL-OOGE BARRE HIIRAALE OO KISMAAYO DOON LAGU GEEYAY:- Isku-socodkii Dadka iyo Gaadiidka ee gudaha Magaalada Kismaayo oo gebi’ahaanba u xirmay Baqdin laga qabo Dagaallo halkaas ka qarxa!!
Posted on April 25, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Magaalada Kismaayo ayaa gashay Bandow iskeed ah oo aysan cidi kusoo rogin Kadib markii uu halkaas xalay gaaray dagaal Barre Aadan Shire (Hiiraale) oo ahaan jiray guddoomiyihii maamulkii dooxada Jubba “Dooxatada Jubba”oo halkaas horay uga talin jiray, Waxaana Dadka Magaaladaas ku sugan Gebi’ahaanba ay dareemayaan in Jawigii Magaalada uu isbedelay Cabsida laga qabo Dagaal Beeleed inuu ka qarxo Magaaladaasna ay sii korortay.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka jiray xiisado kala duwan oo u dhexeeya dhinacyo isku haya gacan ku haynteeda iyo Maamulkeeda, Waxana Magaalada kuwada sugan Ciidamo iska soo horjeeda.
Ciidamada Kenya iyo Maleeshiyo beeleedka Raaskaambooni oo kamid ah Ciidamada Kismaayo ku sugan ayaa ku adkeysanaya weli in ay Maamul uga dhawaaqaan halkaas, halka dhinaca kalena Maleeshiyo Beeleed inay ka amarqaata maaamula Xasan Gurguurte ee ku sugan Magaalada ay ku adkeysanayaan in Dowladda Soomaaliya oo qura ay Xaq u leedahay in ay Maamul Kumeelgaar ah u sameyso Jubbooyinka inta la’isaga keenayo Beelaha wada dega Deegaannadaas, Waxana Ciidamada Dowladda ee halkaas ku sugan ay Kooxda Raaskaambooni u arkaan Jufo garab kahelaya Ciidamada Kenya.
Arrintu si kastaba ha’ahaatee Xiisadda Kismaayo ka taagan oo awalba aad u kacsaneyd ayaa haatan waxa la’oran karaa waxay isku sii shareertay cirka kadib markii uu halkaasi gaaray Barre Hiiraalle oo halkaas horay uga soo talin jiray Horayna u sheegay in Axmed Madoobe iyo Kooxdiisa Kaambooniyiintu ay yihiin Jufo garab ka helaya Ciidamada Kenya oo doonaya in ay qasab wax ku maquuniyaan.
TOP NEWS:-Dowladda Itoobiya oo Xubno Wasiiro cusub ku yeelanaysa Xukuumada Saacid.
Saacid Shirdoon ayaa dhawaan tagay Magaalada Adis Ababa ee Caasimada Dalka Itoobiya,waxaana uu lakulmay madax katirsan Itoobiya.
Xog la helay ayaa sheegeysa in Itoobiya ay kadalbatay Saacid uu isku shaan dheyn kusameeyo Xukuumadiisa isagoo badalaya wasiirro loo soo far muuqay kuna soo daraya kuwa cusub ee ay wadato Itoobiya.
Isku shaan dhaynta ayaa si gaar ah usaameyn doonto wasaaradaha Gudaha,warfaafinta iyo kuwa kaloo kamid ah wasiiro Dowlayaal sida xogta lagu helay.
Itoobiya ayaa shuruud ku xirtay taageerro ay siiso Dowladda Saacid iyadoona latilmaamay in qeyb lexaad leh looga qoon deyn doono miisaaniyada sanad laha ee ay ku shaqayso xukuumada Saacid.
Ragga ay wadato Itoobiya ayaa waxaa laga xusi karaa Axmed Cabdi salaan ay la doonayso inuu noqdo wasiirka warfaafinta amaba safiirka Dowladda ufadhiya Dalka Kenya halkaasi oo Itoobiya u aragto inay kahagi karto siyaasadeeda Somaaliya maadaama Kenya xafiisyo ku leeyihiin dalalka faragalinta ku haya arimaha Soomaaliya.
Lama oga xiliga ay dhacayso isku shaan dheynta golaha wasiirada laakin Saacid ayaa bilaabay olole uu ku hirgalinayo dalabka Itoobiya isagoo arinkaasi kala showraya madaxweyne Xasan Maxamuud Culusow.
Dowladihii KMG ahaa ee dalka soo maray ayay Itoobiya dowr weyn ku lahayd,waxaana kamid ahaa wasiiro iyada ay keentay oo ka shaqeeya danaha Itoobiya.
Burburka dhaqaale ee kajira dalalka gaalada isku magacaaba barwaaqo sooran ayaa laga dareemay dunida,iyadoo ay saameyneyso mashruucooda ay ugu magac dareen ladagaalanka argagaxisada.
Xiligii Maxkamadaha oo Itoobiya ay kusoo duushay Gobalada koonfurta Soomaaliya ayay helaysay dhaqaalo ka imaanayay Mareykanka laakin markaan oo bixis ay bilaabeen hadiiba ay soo laabtaan waxay kujoogi doonaan lacago laaluush ah oo ay bixiso Dowladda Federaalka,waxaana lasheegayaa in qeyb kulahaan doonaan dhaqaalaha laga helay Dekada iyo Garoonka Muqdisho.
Jawaari oo ku ooyay General Yahonis”Xabashi”
General Yahonis ayaa la sheegay in uu Jawaari u sheegay in qorshaha ka bixitaanka ciidanka Itoobiya ee Soomaaliya lagasoo gooyay wasaaradda gaashaandhigga Ee magaalada Addis Ababa islamarkaana aysan iyagu baajin karin qorshahaasi.
Ciidanka Itoobiya ayaa dhawaan isaga cararay magaalada Xudur ee gobolka Bakool halkaasi oo ay dib ula wareegeen ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
GUMAYSIGA IYO KUWA GARABKA U AH:-Safarka Abdi Ilay ee Kaam-Abokor, Xarshin, Daroor iyo Degmada Gaashaamo. Yaa Maalgaliyay, Yaase la Socday?
Xawaaladda Dahabshiil – Suhura Travel Agency: Taariikh waxay u qaybsantaa qaybo badan lakiin marka la isku wada keeno waxay isku noqonayaan Taariikh (History) dib u barida nolo lihii iyo dadkii la soo dhaafay. waxaan qabaa wax alaale iyo waxaad dhaaftaaba inay taariikh yihiin
Shacabka somaalida Ogadenia waxay soo mareen marxalado badan oo kala duwan iyo dhacdooyin badan oo taariikhi ah., sidaas darteedna ay tahay in shaqsi kasta uu barto, ilaaliyo islamarkaasna uu sii gudbiyo oo sidii asagaba loo soo gaarsiiyay uu markiisa u gaarsiiyo jiilalka danbe, oo ay lagama maarmaan tahay in ay helaan taariikhdooda oo dhab ah. Dunidu waa silsilad taxan oo taariikh xambaarsan.
Shacabka somaalida Ogadenia waxay ku jiraan gumeysi madow , isla markaana dhaxal siiyay Barakicin, dil aan loo aabo yeelin,rag iyo dumar,ciyaal iyo caamo,gumaysiga ,TPLF,wuxuu gaarsiiyay heer S/Ogadenia ka qaxaan dhulkoodii hooyo, kuna qaxaan dalalka dariska ah. Hadaba su,aasha isweydiinta mudan waxay tahay inaynu dul-istaagno,noocyadda kala duwan ee gumeysiga, TPLF- ku taageeray gumaadka shacabka somaalida Ogadenia , ee markaasi heshiiska kula galay.
Maamulka –TPLF- markuu ogaadday mowqifka S/ogadenia -1994-1995- wuxuu guda gallay dhisida xisbiyo taabacsan siyaasadda xisbiga . Waxaa la martiqaaday shacabka somaaliyeed ee ku nool deegaanka iyo gobolada kala duwan Ogadenia. Waxaana lugu war-galiyay in qabiil kasta la yimaado magaca –Xisbi- . Ahmiyada iyo qorshaha – TPLF- wuxuu ahaa in awoodda ururka –ONLF- meesha laga saarro , isla markaana la, abuuro nidaaam qaybi oo xukun ah – Divided and Rule Policy-
Maamulka –TPLF- waxay maal iyo awood ku bixiyeen inay soo saaraan xisbigii – DAL – Democratic Alliance League . waxaana masuul ka ahaa , shaqsi ka soo jeedda gobolka waqooyi ama –Hergaysa- xisbigaasi waxaa maal – galinayay Dr C/Majid husein oo markaasi ahaa wasiir dowlada dhexe ah.
Laga soo bilaabo xiligaasi – Xawaaladda Dahabshiil – waxay taageero maaliyadeed iyo mid siyaasadeed siineysay xisbiyadii soo maray dhulka somaalida Ogadenia, waxayna dhinac- kala wadday maamulka –TPLF- . Xawaaladda –dahabshiil waxay kaloo qayb ka qaadatay dagaaladdii laga soo abaabulay magaalada – Hergaysa – ee shacabka masaakinta ah lugu gumaaday magaalooyinka , kala ah. Yoocaale,Awaare ,Marsin,Danood- 2004-2006- 2008- 2010-. Maamulkii soo maray – Jigjiga- xiligii – Eid daahir- waxay Xawaaladda Dahabshiil gacanta ku dhigtay miisaaniyadii gobalka , waxayna kasbatay sumcad lugu aamino dalka Ethiopia oo iddil.
Xawaaladda –Dahabshiil- waxay xidhidh hoose yeesheen ganacsato – Tigree ah- waxayna isla meel dhigeen qorshe-yaal miisaaniyad culus ku baxeyso. Dhinaca kale xawaaladda dahabshill waxay noqotay xawaaladda kaliye- Ethiopian National Bank- Share – ku yeelatay , marka loo fiiriyo xawaaladaha kale somaalida.
Roodo Afjano gabay wadani ah”VIDEO”